आइतवार बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
आइतवार बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
१८ असोज, काठमाडौं । शुक्रवार घटेको सुनको मूल्य आइतवार बढेको छ । बिहीवार प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य ९४ हजार ५ सय रहेको थियो । शुक्रवार तोलामा २ सयले कमि भइ प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य ९४ हजार ३ सय कायम भएको थियो । तर आइतवार फेरी ३ सय रुपैयाले बढेर विहिबारकै मूल्य कायम भएको छ । अर्थात छापावाला सुनको मूल्य ९४ हजार ५ सय तथा तेजावी सुनको मूल्य ९४ हजार तोकिएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य ११ सय ८० कायम भएको छ । बिहीवार र शुक्रवार ११ सय ७५ रुपैयाँ तोलामा कारोवार भएको चाँदी आज ५ रुपैयाले बढेको हो । लामोे समयदेखी सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ ।